घर / ब्लग / किन अन्य व्यक्तिको बाथरूम सधैं राम्रो देखिन्छन्?
2021 / 04 / 12 वर्गीकरणब्लग 1572 0
धेरै मानिसहरूले नवनिर्माण पछि उनीहरूको आफ्नै घरलाई हेर्छन्, र त्यसपछि अरूसँग तुलना गर्छन्, सधैं महसुस गर्छन् कि अरू मानिसहरूले उनीहरूको राम्रो देखिने भन्दा राम्रो छ, के यो "अरू व्यक्तिको बच्चाहरू" को चेन प्रतिक्रिया हो? आज हामी अरू व्यक्तिको बाथरूम सजावटमा हेर्नेछौं, यो वास्तवमै तिनीहरूको आफ्नै घरभन्दा राम्रो छ?
१, हेक्सागोनल टाईल्सको माध्यमले मैदान प्रशस्त गरियो, यो सुन्दर छ। भित्ताहरू समान सेता टाइलहरू छन् जसले बाथरूमलाई अधिक खुला र उज्यालो बनाउँदछ। ह्याing्गिंग तस्बिरहरू, काठको सि ex्क, उत्तम दर्पण, भित्ता बत्तीहरू, आदि, पूरै सजावटले बाथरूमलाई विशेष रूपमा मोडी बनाउँछ।
२, काठको अन्नको टाइल सहितको पर्खाल, प्रभाव पनि अत्यन्त व्यक्तिगत छ, तुरुन्तै यो हल्का रंगको ठाउँ गर्दछ, फरक देखिन्छ। नुहाउने आपूर्तिहरू राख्न सुविधाजनक, भित्ता व्यावहारिक र सुन्दरको रक्षा गर्नुहोस्। पुष्प व्यवस्था संग सजिलो, शैली को पूर्ण।
3, बाथरूम ठाउँ ठूलो छ, कुनै कुरा कसरी व्यवस्थित गर्ने, व्यावहारिकता पनि खराब छैन। भित्ताहरुमा केहि अलल्फहरू स्थापना गर्नुहोस्, तुरुन्तै चीजहरू राख्नको लागि ठाउँ छ, तल दुई भण्डारण टोकरीहरू पनि राम्रा छन्।
,, काठको टाइलहरू, संयोजनको साथ खैरो टाईलहरूसँग धेरै बनावट देखिन्छ।
,, ठाउँको ग्रे टोनले मानिसहरूलाई उदासिन तुल्याएन, बरु धेरै स्वभाविक देखियो। विशेष गरी सि the्क भित्ताहरू, सामग्रीहरू प्रयोग गरिएको, उग्र भावना, धेरै ट्रेंडी र स्टाइलिश। सिंकमा अनियमित वाशबासिन, र पुष्प सजावटको छेउमा, जताततै शैली देखाउन सक्छ।
,, भित्ता दुई रंगमा छ, निराश र नीरस छैन, बनावट भरिएको, र जमीन फूल टाइलहरूले प्रशस्त गरीएको छ, सबैभन्दा ठूलो आकर्षण बन्छ।
,, भूमि कालो हेक्सागोनल टाइल हो, भित्तामा सेतो टाईलहरू, कालो र सेतो, क्लासिक रंग रंग
,, गुलाबी उत्कृष्ट र सुन्दर सिंक आँखा आकर्षित गर्ने छ। बाथरूममा कुनै पनि ठाउँ राम्रोसँग व्यवस्थित गरिएको छ, पूरै चम्किनेछ!
9, भण्डारण राम्रो छ!
१२, उही टाइलको भित्ता र फ्लोर, प्राकृतिक बनावट, माथिल्लो देखिन्छ। सेतो भित्तामा ह्या toilet्ग गरिएको शौचालय र खरानी स्थानमा अलि सेतो एक्सेंटको साथ उत्तम बाथटब, यो अझ राम्रो देखिन्छ।
अघिल्लो :: एउटा बाथरूम पर्याप्त छ, तपाईंलाई चीनमा दुई बाथरूम किन चाहिन्छ? अर्को: यी बाथरूमहरू पनि धेरै मूल्यवान छन्, के तपाईंले ती सबै देख्नु भयो?
2021 / 04 / 22 2699
2021 / 04 / 21 1859